07|11|10 – Sakafo Malagasy hanohanana ny marenina [Penthalaz, Lausanne] – i am a malagasy in genève
29 octobre 2007 5 novembre 2007
07|11|10 – Sakafo Malagasy hanohanana ny marenina [Penthalaz, Lausanne]
Ny Asabotsy 10 Novambra 2007, manomboka amin’ny 6:30 ora hariva dia misy sakafo Malagasy [vary, laoka akoho amina kôkô, lasary voatabia, tsindrin-tsakafo hafa kely] atao any Penthalaz [Grande Salle de Penthalaz, Penthalaz, CH | Fiaran-dalamby hatrany amin’ny Garan’i Cossonay-Gare, avy eo dian-tongotra 6 min mankany Penthalaz-village].
Io dia hetsika karakarain’ny Association Mirana isan-taona ho fanohana ny marenina any Madagasikara. Hisy sarimihetsika hampahafantarana bebe kokoa ny asan’ny fikambanana any Madagasikara mandritra izany takariva izany.
Fandraisana anjara : 30.- CHF hoan’ny olon-dehibe ary 1.- CHF isan-taona hoan’ireo tanora latsaky ny 16 taona. Irina ho azo alohan’ny Asabotsy 3 Novambra 2007 ao amin’ny +41 21 861 48 58 na mirana @ mirana.org ireo famandrihana toerana.
[Sakafo fanohanana ny Association Mirana tamin’ny tana 2006 >>]
Posté dans ala-voly, fanohananaTagué association mirana, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, mareninapar tomavanaLaisser un commentaire
← Tsidi-pahitra an’i Talata-Ampano [Fianarantsoa]
07|11|01 – Tiharea any amin’ny festival Voix sacrées du monde [Lausanne] →